India: Miherisetra amin’ny bilaogera, mangalatra votoaty, ary mandrahona! · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Jona 2018 4:17 GMT
Vakio amin'ny teny македонски, हिन्दी, English
Amin'ny maha-bilaogera anay, mora atao lasibatra izahay. Tsy ijerena tsy fisehoana anarana, solonanarana na ny toy izany, ny fandrahonana azo no mahatonga anay hijery indray ny maha-zavadehibe ny bilaogy. Toy ny niatrika tadio ny nandraisan'ny tontolon'ny bilaogy ny raharaha Inji Pennu sy Kerals.com. Tao amin'ny hita ho fisetrasetrana madiodio sy fandrahonana, nanjary tonga hatramin'ny fanorisorenana bilaogera iray ny nataon'ny Kerals.com, tranonkala iray mpamelively ny olona avy any Kerala sy Malayali. Hita ho nangataka tamim-panajana ny Kerals.com hanaisotra votoaty nangalarin-dry zareo taminy ny bilaogera Inji Pennu, izay mibilaogy ao amin'ny Ginger and Mango. Avy eo izy namoaka ny valintenin-dry zareo, ary niteraka setriny maventy avy amin'ny mpamakin'ny bilaoginy ny fifanoratana imailaka nifanaovan-dry zareo. Raha tsy tena zava-baovao loatra ny fangalaram-botoaty avy amin'ny bilaogy, tsy afa-bela sy tsy afa-maina tamin'izany toe-javatra izany ny tetikady sy ny fandrahonana herisetra avy amin'ny tranonkala mangalatra votoaty.
Hindi Blog Reporter manoratra hoe:
Mamelatra ny adihevitra i Saptavarnangal, miaraka amin'ny fizotry ny olana raha nipoitra izy ireo ary nanoratra momba ireo tranonkala hafa tazomin'ity vondrona ity ihany.
Milaza ihany koa ny the breeze fa toa naka ny anaran'i Inji Pennu sy namorona tranonkala sandoka ny solontena avy amin'ny Kerals.com.